August 18, 2021 – Nepali Reformed Church
August 18, 2021 September 17, 2021 nrcnepal
प्रभू येशूलाई पाउन भन्दा पहिले मेरो घर परिवारको अवस्था धेरै नाजुक थियो । यो हुनुमा बिभिन्न कारणहरु थिए र सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ म नै थिएँ । म मादक पदार्थ सेवन गर्दथेँ । जुवा तास खेलेर समय बिताउने र खेत बारी बाँझो राख्ने गर्दथेँ । अनि अलि अलि भण्डार गरेका अन्नबालीहरुले जेनतेन छ महिना खान पुग्थ्यो । म आपैm धामी काम पनि गर्ने गर्दथें । तर जब मैले २०४८÷०२÷०५ गते प्रभूलाई ग्रहण गरेँ तब मैले यी सबै खराब कुराहरु त्यागी दिएँ । बिस्तारै परमेश्वरको आशिष्ले मेरा घर परिवारको अबस्थामा सुधार हुँदै गयो । केहि समय पछि हामीले रौतहटमा घर निर्माण ग¥यौँ । छोराले सरकारी जागिर खान सफल भयो । यसरी परमेश्वरको आशिषले हाम्रो परिवारको अवस्था बदलिन पुग्यो । त्यो समयसम्म हामी ए.जि. चर्चमा नै सेवा गथ्यौँ । तर बिस्तारै हामीले गोठालोबाट पाउनु पर्ने परमेश्वरको वास्ता नपाएको अनुभव गर्न थाल्यौँ ।
त्यसपछि हाम्रो परिवार लगायत धेरै व्यक्तिहरु त्यस मण्डलीबाट छुट्टिएर पा. रुबेन रानाले सेवाकाई गर्दै गरेको काभ्रे चर्च सँग समन्वय गरी छुट्टै सेवा संगती गर्न शुरु ग¥यौँ । त्यस समयमा रौतहटमा सञ्चालित सेवा म आपैmले चलाउने गर्थँे । पा. रुबेन रानासँगको सेबाकाई पनि बिभिन्न कारणबस राम्रो हुन सकेन । सेबाकाईमा आएको उकाली ओरालीले ममा निराशा ल्यायो । यहि समयमा मेरो भेट मिलन मगर भाईसँग भयो । भाई मिलनले क्रस वे, एन.आर.सि.को बारेमा धेरै कुरा बताउनुभयो । केहि समयपछि पा. लकिम राई र रेभ. अरबिन पोखरेलसँग भेटेर थप जानकारी लिएपछि परमेश्वरको सेवालाई आत्मिकी रुपमा बृद्धि गराउन सक्ने सहज वातावरणको आशा पलायो । त्यसपछि २०७१÷०२÷०५ गतेवाट एन.आर.सि. सँग सहकार्य गरी सेवालाई शुरु ग¥यौं । केहि समयसम्म मलाई सेवाको क्षेत्रमा मिलन भाईले सहायता पु¥याउनु भयो । त्यसपछि परमेश्वरको योजना अनुसार २०७२÷०२÷०१ गतेवाट आफैले जिम्मेवारी लिई सेवालाई अघि बढाउन थालेँ । परमेश्वरको अनुग्रहमा मण्डली बृद्धि हुँदै जान थाल्यो । यसरी भाडामा लिएको कोठामा विश्वासीहरु नअटाउने भएपछि चर्च भबन निर्माण गर्ने योजना भयो जुन योजना सफल पनि भयो । मण्डलीका बिश्वासीहरुले सेवा संगतीको लागि नयाँ भवन प्राप्त गरे र मैले पनि एक्स.एल.टि.आई तालिम लिने मौका पाएँ ।
यसरी सिक्दै सिकाउँदै रौतहट क्रुसको मण्डलीमा पाष्टरीय सेवाको काममा निरन्तरता दिई राखेको छु र जीवन रहुन्जेल एन.आर.सि.सँग सहकार्य गर्दै परमेश्वरको सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छु ।
मैैले चाहेको शान्ति येशूमा पाए
सर्वप्रथम परमेश्वरले म जस्तो पापीलाई आप्mनो सन्तान हुन चुन्नुु भएको लागि धन्यवाद चढाउछु । ओखलढूंगा जस्तो दुर्गम ठाँउमा जन्मे पनि सानै उमेरदेखि येशूको बारेमा सुन्ने मौका पाए । म बालक हुदै मावली हजुरआमालाई अचम्मको रोगले समात्यो । थरथर काम्दै आखाँ सेतै पल्टाएर दाह्रा किट्दै बेहोस हुने । हजुरआमाले येशूको बारेमा सुन्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँलाई त्यो बिमार जीवनभरी फर्केर आएन ।मेरो आमा पनि विमार हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि विश्वास गर्नुभयो र चंगै पाउनुभयो । गाउँमा कोही विश्वासी थिएन चर्च पनि थिएन । मैले चर्चको संगति नदेखे पनि येशूको नाम बालककालदेखि नै सुन्ने मौका पाए तापनि मैले कहिल्यै बाइबल खोलेर पढिन येशूमा विश्वास गरिन । मलाई कहिल्यै येशूको खाँचो महसुस भएन । मैले त जीवनमा धेरै पैसा कमाउने हो रमाइलो गर्ने हो जीवन सुख चैनमा बिताउने हो यति मात्रै विचार गर्थे । यस्तै चाहना बोकेर जवान भएपछि म इन्डियन आर्मीमा भर्तिभए । पैसा कमाउन थालेपछि त झन मैले येशूको सम्झना पनि गर्न छाडे । जीवन रमाइलोसंग आनन्दमा बिताउने यतिमात्र सोच हुन्थ्यो । तर जति म आनन्दसंग जिउन चाहन्थे उति मृत्युको डरले मलाई समाउन थाल्यो । दिन दिनै मेरो जीवन निरासाको खाडलमा डुब्न थाल्यो । तब सानै देखि सुन्दै आएको येशूको सम्झना आउन थाल्यो । आमा र हजुरआमाको दुःखमा सहायता गर्नुहुने येशूले मलाई पनि सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने आशा मनमा जाग्न थाल्यो । तब मैले येशूको बारेमा जान्ने इच्छाले बाइबल पढ्न थाले ।
एक दिन बाइबल पढ्दै थिए येशूको वचनले मेरो मुटु नै चिसो भयो । त्यस्तो वचन त मैले कहिल्यै कुनै किताबमा पढेको थिएन । येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हु मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ । म निरासा र मृत्युको डरमा बाचिरहेको मान्छेलाई यो भन्दा खुसिको समाचार के हुन सक्छ र ? त्यसपछि मैले येशूलाई जीवन अर्पण गरे र पाष्टर गोपाल राईको हातबाट ई.सं २४ डिसेम्बर १९९४ मा बस्तिस्मा लिए ।बप्तिस्मा लिएपछि परमेश्वरले मलाई आप्mनो सेवाकाइमा बोलाउनुभयो र जागिरबाट राजीनामा दिएर काठमाण्डुमा बाइबल कलेज पढ्न आए र पढाइ सिद्धिएपछि नेपाली रिफोम्र्ड चर्च अन्तरगत मिशन पाष्टरकोरुपमा सेवाकाइ गरिरहेकोछु । परमेश्वरले पूर्ब मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म हिमाल देखि तराइसम्म सुसमाचार पैmलाउन र मण्डली स्थापना गर्न सहायता गरिरहनुभएको छ ।
अचम्म लाग्छ जीवनमा बितेका दिनहरु सम्झना गर्दा कि परमेश्वरले कसरी उहाँको पूर्ब निर्धारित योजाना अनुसार मेरो जीवनलाई डोराउनुभएको छ । परमेश्वरले आप्mनो बाटोमा मलाइ डोराउन चाहनुहुन्थ्यो म भने आप्mनै बाटोहरुमा हिड्न चाहन्थे । परमेश्वरको इच्छा र मेरो इच्छामा यहिनेर बेमेल हुदा म निरासको आधिमा डुब्न पुगे । मेरो जीवन परमेश्वरको निम्ति बनिएको रहेछ मैले आप्mनो जीवन उहाँको निम्ति अर्पण नगरेसम्म बेचैनीले सताइरह्यो । पाष्टर अरबिन पोख्रेलज्यूले वचन प्रचार गर्दा अगष्टिनको भनाई दोहोराइ रहनुहुन्छ कि मानिसको हृदयले सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा विश्राम नलिएसम्म तड्पी रहन्छ । म पनि त्यस्तै भए । मेरो हृदयले मेरो जीवनको आकार कोर्नुहुनेलाई नभेटेसम्म तड्पी रह्यो । म जस्तो श्वार्थि पापीलाई परमेश्वरले अनन्त जीवनको लागि चुन्नुभयो । अब डर छैन यस संसारबाट बिदा भएपनि मृत्युपारी येशूको देशमा म फेरी उदाउनेछु । त्यहाँ मलाई दुःख कष्ट शोक पीडा अनि मृत्यु हुनेछैन । मेरो निम्ति येशूले कस्तो सुनौलो भविष्य साचेर राखिदिनुभएको छ सम्झन्दा हृदय आनन्दले भरिन्छ । मैले चाहेको शान्ति येशूमा पाए । यस्तो शान्ति दिनुहुने शान्तिका परमेश्वरलाई सदासर्वदा महिमा र लाखौ करडौ धन्यवाद भएकोहोस् ।
रेभ रुएल थापा गुरुबाको जीवन गवाही
August 18, 2021 August 18, 2021 nrcnepal
मेरो जन्म भए लगत्तै आमाको शारीरिक कमजोरीका साथै केहि रोगहरु सुरु भयो ׀ त्यसको साथै आमा प्रतिको दृष्टिकोण माईती र घर दुवै परिवारमा त्यति राम्रो थिएन । विविध कारणहरुले जस्तै ः माइती परिवारले यस्तो आरोप लगाए कि, कुनै अशुभ दिनमा जन्मेको कारण आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको हो र यो आफ्नो बाउ खाने छोरी हो भने र अलक्षिनीको दर्जा दिए । यता घरमा चाँहि सधै बिरामी हुने । सात वर्ष भयो पहिलो सन्तान जन्मेको तर दोस्रो हँुदैन । यो केरा बेते हो । यस्ता आरोपहरु र भनाइहरुले विरक्तिएको जीवन र उता आफ्नो श्रीमान् पनि पल्टनमा । आफुलाई सन्चो नभएको धेरै कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परेको थियो׀ यो सबै दुखः कष्ट भन्दा पनि बिरामीको कारण बुबाले हामीलाई (म र आमा) भारत आफ्नो जागिर तिरै, उहाँकै पल्टनमा लानु भयो त्यति बेला अर्थात सन् १९७९—१९८० तिर उहाँको पल्टन, ग्वालियर, मध्य प्रदेशमा थियो । सात वर्ष पछि, परिवारमा बल्ल अर्को सन्तान छोरीको रुपमा जन्म भयो र एउटा खुशीको लहर छायो । लाहुर (पल्टन)मा हुने हामीहरुमा मात्र त्यो खुशी सिमित नभएर यो सबै परिवार आफन्तहरुमा पनि थियो । खुशी पनि किन नहोस् र, बुबाको तीन दाजुभाइहरुमा कसैको पनि छोरी थिएन, मात्र चारवटा नातीहरु भएको बाजे जो आफै पनि भारतीय भुपु सैनिक हुनुहुनथ्यो । उहाँले नातिनी जन्मेको खबर पाउने बित्तिकै घर बोलाउनु भयो र हामीहरु सबै फेरी नेपाल आफ्नो घर फर्केर आयौँ ।
बुबा केहि दिनको आफ्नो छुट्टि पुरा गरेर पुनः पल्टनमा फर्कनुभयो र आमाको बिरामी भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो । केहि दिन ठिक हुने फेरी उस्तै । पुनः तीन वर्ष पछि हामी लाई फेरी पल्टनमा नै लैजान बुबा घर आउनुभयो र १९८३ मा फेरी हामी भारत गयौँ र त्यति बेला बुबाको पल्टन उत्तर प्रदेश को अल्मोड़ा भन्ने ठाउँमा थियो । त्यहाँ पुगेको केहि महिना पछि फेरी आमाको उपचारको क्रम जारी भयो र पनि स्वास्थ्यमा खासै सुधार देखिएन । जसको कारण मेरी आमाको उपचार राम्रो मिलिटरी अस्पतालमा गर्न पाउने र हुन् सक्ने भएकोले बुबाले पल्टन बाट वाराणसी ट्रेनिंग सेन्टरको लागि पोस्टिंग माग्नुभयो । केहि महिना अथवा वर्षकै अन्तरालमा सन् १९८५ मा उहाको पोस्टिंग स्वीकार गरियो र हामी फेरी अल्मोड़ा देखि वाराणसी ३९ गोरखा ट्रेनिंग सेन्टरमा सरुवा भयाँै । आमाको रोग उपचारको निम्ति अस्पतालमा मात्र नभएर अन्य विभिन्न ठाउँहरुमा पनि जस्तैः बिजुवा, झाँक्री, तान्त्रिक, झारफुक गर्नेहरु सुनेको जति र भ्याउन सक्ने ठाउँहरु जति सबैमा लगियो र अझै धाउने क्रम जारी नै थियो ׀
सन् १९८९ मा पास्टर दानिएल राई कालिम्पोंग देखि वाराणसीमा केहि ख्रीस्टियन पुस्तिका, पत्रिकाहरु र अन्य केहि लेखहरु छाप्ने शिलशिलामा आउनुभएको रहेछ । त्यही मौका पारेर आर्मी क्याम्प भित्र केहि चिनजानको घरमा आउ जाउका साथै संगति पनि गर्नुभएको रहेछ । किनकी जसको घरमा उहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरु पनि इसाईहरु हुनुहुँदो रहेछ तर यस विषयमा हामीले पहिला कहिल्यै थाहा पाएका थिएनौँ । हप्ताको केहि दिनहरुमा संगति पनि आयोजना गरिने कुराहरु जानकारी भयो । यता मेरो आमाको बिरामी अवस्था भने उस्तै र शिथिल थियो । एक रात आयोजना गरेको कार्यक्रममा सबै लाई निम्तो आयो तर हामीलाई निम्तो आएन । तरपनि कसैले भनेको आधारमा सकि नसकी भएपनि त्यो दिन मेरो आमा संगतिमा सामिल हुनुभएछ । कहिल्यै नसुनेको र अनुभव नगरेको कुरा उहाँको हृदयमा हुन आएछन् । उहाँ त्यस रात, एउटा नयाँ जीवन जीउने आशा बोकेर घर आउनुभयो र बुबालाई सबै कुराहरु भन्नुभयो । मलाई पनि आमाको त्यो भनाई सुन्दा मैले आफ्नो मनमा सोच्न थाले अब मेरी आमा पनि बच्नुहुनेछ । सबैको आमाहरु जस्तै मेरी आमा पनि हास्ने बस्ने गर्नुहुने छ र हाम्रो लागि मीठो मीठो खाना पकाउनुहुनेछ । त्यसपछि हरेक दिन स्कुल बाट फर्कँदा आमा लाई कहाँ लग्यो होला मेरी आमा फेरी फर्केर घर आउनु होला कि आउनुहुन्न होला भनेर आँखाभरी आँसु लिएर बस्न अब नपर्ने भयो जस्तो लाग्न थाल्यो ׀ जीवनमा एउटा नयाँ आशाको मुना पलाउने आभाषले मेरो पनि जीवन खुशी र आशाले भरिएको त्यो दिन आज जस्तै लाग्छ ׀
यस विषयमा चाल पाए पछि आमा तेह्र चोटी सम्म लगातार नबिराईकन संगतिमा हिंड्नुभयो । सबै सत्यता थाहा पाउनुभयो र येशु मात्र मेरो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ अब देखि तपाई लाई छाडी अरुकसैलाई लाई पुज्ने छैन भनेर ग्रहण पनि गर्नुभएको कुरा घरमा आएर बुबा लाई खुशीको साथ भन्नुभयो । तर समाज, रीतिरिवाज, पुर्खौँदेखि चल्दै आएको परम्पराको डरले बुबाले आमालाई हकार्दै भन्नुभयो….“यो तैँले के गरिस्, यो धर्मको बारेमा तँलाई के थाहा छ..? हामीहरुले मान्ने धर्म होइन यो । यदि यो धर्म मान्यौँ भने हामीलाई समाज देखि वहिस्कार गर्नेछन् । हामी फर्केर आफ्नो गाउँ घर जान पाउदैनँौ। हाम्रो देव, कुलायन, इस्ट, मित्र सबै त्याग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ ….जा..जा. जा.. अहिलै यसलाई फर्काएर आइज ..”.! अचम्म विडम्बनाको घडी… हतार हतार आमा भान्सा कोठामा जान्छिन् र नांगो खुकुरी लिएर बाबाको हातमा दिदै भन्छिन् “ला..ला… यो खुकुरीले मेरो घाटी काट…..! तैपनि म मेरो परमेश्वरलाई छोड्दिन, यतिको वर्ष सम्म बिरामी हुँदा तिम्रा तेत्तीस कोटी देवी देवताले के गरे , इस्टमित्र, देव कुलेन ले के गर्यो, डाक्टरले के गर्यो..? भाकल पुरा गर्न कहाँ कहाँ गइन ? …. कसले के गर्यो….? जुन दिन देखि मैले यो सत्य परमेश्वर लाई विश्वास गरँे म ठिक भएको छु र आज मलाई यो छोड भन्छौ ? मेरो घाटी अलग गर्दे …मलाई काट, मार तब मात्र येशु लाई विश्वास गर्न छोड्छु” ׀
बर्षौ पुरानो बिरामीको अन्त त भयो जस्तो लाग्थ्यो तर घरमा अर्को अझ ठुलो द्वन्द नै सुरु भयो जस्तो भयो । तर परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेम यति धेरै कि उहाँको बचनले भने अनुसार ….. यूहन्ना ८ः३२ मा यसरी भनेको छ ….. “तब तिमीहरुले सत्य के हो सो जान्नेछौ, र सत्यले तिमीहरुलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ ׀” यसै कारण यो समस्या धेरै समय रहेन कारण परमेश्वरले बुबाको हृदयमा काम गर्नुभयो र बिस्तारै सत्यता के हो येशु ख्रीष्टकोे बारेमा बुझ्दै जानुभयो । येशु लाई आफ्नो मुक्तिदाताको रुपमा ग्रहण नगरेता पनि झैँझगडा कम भयो । घरमा संगति को लागि ढोका खोलियो त्यही वर्ष बुबाको पल्टन देहरादुनमा सरुवा भएको कारण हामी सब परिवार पुनः देहरादुन गयौँ र त्यहाँ हाम्रो भेट पास्टर पुरनाबल सँग भयो । यो उहाँको अनुग्रहको कारण थियो । विश्वास को असल शिक्षा र सिद्धान्तमा हुर्कन पायौँ । सन् १९९१ मा हामी सबै परिवारले पानीको बप्तिस्मा लियौँ र ऋयखभलबलत च्भायचmभम एचभकदथतभचष्बल ऋजगचअज देहरादुनको सदस्यमा पनि गनियौँ । म परमेश्वरको सेवाकाईको क्षेत्रमा उत्रियोस भनि आमाले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्न शुरु गर्नुभयो । साथै पास्टर पुरना बलको पनि यही इच्छा रहेको र उहाँले पनि स्कूल को अध्ययन सकेर बाइबल कलेजमा भर्ना हुन उत्साहपुर्ण सल्लाह दिनु भयो । अन्तत, यस्तै हुँदै पनि गयो र प्रभुको अनुग्रहको कारणले सानो उमेरमै बाइबल कलेज पढ्ने मौका पनि पाएँ ।
हुनत म मण्डलीको एउटा पहिलो नेपाली ठिटो भएर पनि हुन् सक्छ लगभग १२, १५ लाख नेपाली हरुको बसोबास रहेको क्षेत्र देहरादुन र चार वर्षको अध्ययन पछि आफ्नै मण्डली मा नेपाली चर्चको सेवकको रुपमा सेवा गर्ने मौका पनि पाए ׀ सम्भवत त्यतिबेला सेवाकाइको क्षेत्रमा कलिलो र अल्लारेनै थिएँ होला । सेवाकाइको निम्ति परमेश्वरको बोलावट हुनुपर्छ भन्ने बारेमा त्यति पाको पनि थिइन । पुर्व सेवाकाईको अनुभव बिना सेवाको क्षेत्रमा उत्रँे तर पनि सेवाको सबै जिम्मावारीहरु पूर्ण इमान्दारी र निष्ठापूर्वक गर्ने हृदय प्रभुले ममा सृजनु भएको थियो भनी मलाई विश्वास पनि थियो ׀ यसै कारणले त सन् १९९७ को मे महिना ५ तारिख देखि सन् २०१० जनवरी महिना सम्म देहरादुनको नेपाली हरु बीचमा रहेर सेवा गरेको १३ वर्ष पनि बितिसकेको रहेछ ׀
यो तेह्र वर्षको समयमा प्रभुले धेरै कुराहरु सिकाउनुभयो । चाहे संघर्षका दिनहरु भएर जाँदा होस् अथवा अविस्मरणीय आशिषमय क्षणहरु बाट भएर जाँदा होस्, सन् २००० मा एल्डर अभिषेक भएको थिएँ, भने सन् २००४ जनवरीमा मेरो विवाह भयो । त्यसै गरि सन् २००७, सितम्बर महिना मा Minister of the Word and Sacrament को अभिषेक पाएँ । साथै यो समय भित्र धेरै साथीहरु जुटाउनु भयो र जसको संगतमा म आज सम्म सेवा गर्ने मौका प्रभुले जुटाउनु भएको छ । त्यसपछि सन् २०१० फेब्रुअरी ०२ मा हामी सधँैको लागि देहरादुन छोडेर नेपालमा आयौँ र सेवाकाईको निम्ति फर्किएर स्वदेश आउने वातावरण प्रभुले सृजनुभयो । यहाँ सम्म आउँदा, म र मेरो श्रीमती भरतपुर क्रस वे चुर्चमा सेवाकाई गर्दै आएका छौँ साथै हामी दुवै जनाले एन.आर.सी कार्यालय को जिम्मेवारी साथै सेवाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने मौका पाएका छौ ׀
अन्तमा प्रार्थना सहित, यहोशू ले भने अनुसार….“म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौ ׀” (यहोशू २४ः१५) ׀